हृदयाघात (हर्ट अट्याक) के हो र के कारणले हुन्छ ? - आयो खबर
हृदयाघात (हर्ट अट्याक) के हो र के कारणले हुन्छ ?
२०७४ मंसिर ३ प्रकाशित १४:२४
हृदयाघातको अर्को कारण मधुमेह पनि हो। शरीरमा चिनी अर्थात् ग्लुकोजको मात्रा आवश्यकताभन्दा धेरै हुन जानु नै मधुमेह अर्थात् चिनीरोग लाग्नु हो। मान्छेको रगतमा ७० देखि १ सय ५० मिलिग्रामभन्दा बढी चिनीको मात्रा हुँदा रगत पातलो हुन गई थेग्रो जम्मा हुन्छ। नजानिँदो ढंगले बढ्ने त्यही थेग्रोले हृदयाघात गराउँछ। मुटुरोग विशेषज्ञ डा रेग्मीले कामको बोझ वा अन्य यस्तै कारणले हुने मानसिक तनाव पनि हृदयाघातको एउटा कारण रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार तनावले शरीरमा हानिकारक रसायनहरू उत्पन्न गराउँछन् र ती रसायनले नसा खुम्चिने, नसामा चोट लाग्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। जसका कारण रक्तनलीमा थेग्रो जम्न जान्छ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर ३ प्रकाशित १४:२४
‘जोनी जेन्टलम्यान’ का पल र आँचलसँग दर्शकको सेल्फी क्रेज
सुरक्षागार्डलाई घरमा सहयोगीको रुपमा खटाइएको उल्लेख, पूर्व प्रहरी अधिकारीको सुरक्षार्थ खटिएका ३ सय १५ प्रहरी फिर्ता बोलाइयो